चिसोबाट जोगिनुस्, नत्र यी रोगको संक्रमण होला ! | Sambad Media
उपचारका क्रममा धेरै संक्रमण भएको नदेखिएमा सामान्य औषधिले पनि ठीक हुन सक्छ । तर, यस्ता संक्रमणका कारण निमोनिया देखिएमा विशेष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी लक्षण रहिरहेमा निमोनियाको संक्रमण हुन सक्ने भएकोले तुरुन्तै चिकित्सलाई जँचाउनुपर्छ । निमोनिया भएमा चिकित्सकको परामर्श अनुसार एन्टी बायोटिकको सेवन गर्नुपर्छ । निमोनियाको गम्भीर संक्रमण भएको देखिएमा भने अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । –टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत डा. विमल शर्मा चालिसेसँगको कुराकानीमा आधारित ।